တန်ခွန်ေ ကျာ်မောင်း တဲ့ ကားကိုမစီးရဲ ဘူး ဆို တဲ့ မူးလာ – Shwewiki.com
တန်ခွန်ေ ကျာ်မောင်း တဲ့ ကားကိုမစီးရဲ ဘူး ဆို တဲ့ မူးလာ
ချစ် သူများနေ့မှာ ဘာတွေလုပ်သွားဖို့ရှိလဲ ?
ရန် ကုန်မှာတော့ရှိပါတယ်။ အလုပ်နဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းဖြစ်မှာပါ။ Valentine day နေ့မှာ Radio bar မှာပဲရှိမှာပါ။ အဲ့ပွဲမှာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီနီယာ အစ်ကိုအစ်မတွေပါတယ်။ သူတို့နဲ့အတူတူ ဂျူးရဲ့Song တွေ ဟိုးအရင်က အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုနေကျ ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ ဂျူးရဲ့ Song လေးတွေ ပြန်ဆိုဖြစ်မှာပါ။ အဲ့ဒါကြောင့်မို့ လာပြီးတော့ အားပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ထွေထွေထူးထူးသွားရတာလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ အလွန်ဆုံး မုန့်သွားစားတယ် လျှောက်သွားတယ် ဒီလောက်ပဲရှိမယ်။ ဘာမှတော့ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါဘူး။ ချစ်သူရှိရှိမရှိရှိ ပုံမှန်နေ့ရက်ပါပဲ။ Valentine dayက ထူးခြားသွားတာတစ်ခုက ကိုယ်ချစ်တဲ့မိဘတွေ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ၊ ကိုယ့်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအတွက် အမှတ်တရတော့ ဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်။
တန်ခွန်ကျော် ပရိသတ်တွေက သူ့ကိုကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့အပေါ် ?
ကျွန်တော်ဒီနေ့မှ လိုင်းကောက်ဖွင့်လိုက်တော့ သိန်း ၃၈၀ ကားတဲ့ဆိုတော့ ဟာမိုက်တာပေါ့နော်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဝမ်းသာရမှာပေါ့နော်။ သူ့ပရိသတ်တွေ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့။ ထိုနည်းတူပဲ ကျွန်တော်ပရိသတ်လည်း ကျွန်တော့်ကိုချစ်တာပဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီဟာက ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အသီးအပွင့်တွေပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြိုးစားနေကြတဲ့အပေါ် အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့ တန်ခွန်ကျော်ကိုယ်စားလည်း ကျွန်တော်အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။
ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဆို သွားရလာရတာ အရမ်းခက်ခဲတယ်။ ကိုယ်ကြုံတွေ့နေရတာ ကိုယ်ပဲသိတယ်ဆိုတော့ တကယ်လည်းအဲ့လိုအဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်သွားတော့ ဒါကအရမ်းဂုဏ်ယူစရာပေါ့နော်။အရမ်းလည်း ဝမ်းသာပါ တယ်။ ကားပတ်စီးဖို့တော့ ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပွဲသွားစရာတွေများသေးတယ်။ ဒီကောင်ကားကောမောင်းတတ်ရဲ့လားမသိဘူး(ရယ်လျက်)။ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူးလေ။ သူကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုတာကို(ရယ်လျက်)။ သူကလည်း ကြိုးစားတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ သူကြိုးစားဖို့အတွက် ခွန်အားတွေပိုဖြစ်လာ မယ်ပေါ့နော်။ သူ့ရဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းလည်း ပိုပြီးတော့ တိုးတက်လာမယ်ပေါ့နော်။
ချစ်သူ၊ ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘ၀ဆ က်တိုင်း အတူတူ ဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ်